डिसेम्बर मा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
हिउँ हटाउन र सडक खाली गर्न हिमपात, हाकोडाटे, जापान = शटरस्टकमा शाउल प्रयोग गर्ने एक व्यक्ति
यदि तपाइँ डिसेम्बर मा होक्काइडो जाने योजना बनाउनु हुन्छ भने, तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कति चिसो छ। त्यसो भए, यस पृष्ठमा म डिसेम्बर महिनाको लागि होक्काइडोको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। होक्काइडो टोकियो र ओसाका भन्दा धेरै चिसो छ। जापानको पश्चिम तर्फ, हिउँ अक्सर आउँछ त्यसैले कृपया तपाईंको कोट र अन्य न्यानो सामान नबिर्सनुहोस्।
होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। कृपया तपाइँलाई जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्नुहोस्।
तल डिसेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
डिसेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा प्रश्न र उत्तर
डिसेम्बर मा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
डिसेम्बरको सुरूमा होक्काइडो मौसम
होक्काइडो डिसेम्बरको बीचमा मौसम
डिसेम्बरको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा डिसेम्बरमा हिउँ पर्दछ?
यो डिसेम्बर मा Hokkaido मा अक्सर सुन्न्छ। हिउँलाई निसेको जस्ता स्की क्षेत्रमा थुप्रिएको छ। यद्यपि, सप्पोरो जस्ता शहरहरूमा, यो डिसेम्बरको मध्यदेखि नै हिउँ पर्न थाल्छ।
डिसेम्बरमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
होक्काइडो डिसेम्बरमा धेरै चिसो छ। अधिकतम दिनको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ, विशेष गरी मध्य डिसेम्बर पछि।
डिसेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
डिसेम्बरमा, तपाईंलाई पर्याप्त जाडो सुरक्षा चाहिन्छ। जाडोमा होक्काइडोमा लगाउनको लागि कपडाहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया तपाईंलाई चाहानुहुन्छ भने निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं होक्काइडोको हिउँले ढाकिएको परिदृश्यहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, जनवरी देखि फेब्रुअरी आउँदा उत्तम हुन्छ। यद्यपि डिसेम्बरमा क्रिसमसको प्रकाशहरू धेरै सुन्दर छन्। होक्काइडोमा तपाईले सेता क्रिसमसको अनुभव लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं पक्कै पनि डिसेम्बर मा अद्भुत हिउँ सम्झना बनाउन सक्षम हुनेछ।
डिसेम्बर मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: डिसेम्बर मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
होक्काइडोको तापक्रम डिसेम्बरमा बिस्तारै घट्नेछ। मध्य डिसेम्बरदेखि, बिहान र साँझको कम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तल झर्नेछ।
टोकियो, ओसाका, क्योटो, आदि पनि यस समयमा जाडोको अनुभव गर्दै छन्। यद्यपि होक्काइडो ती क्षेत्रहरू भन्दा धेरै चिसो छ।
यो साँच्चिकै चिसो छ!
होक्काइडोको तापक्रम डिसेम्बरको दिनमा पनि १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने छैन। रात र दिउँसोको बीचमा, तापक्रम प्राय: १० डिग्रीभन्दा कम जमिनमुनि रहन्छ। यो साँच्चिकै चिसो छ।
जापानको समुद्रको नजिकका क्षेत्रहरूमा, जापानको सागरबाट बगिरहेको बादलले धेरै हिउँ ल्याउँछ। अर्कोतर्फ, अपेक्षाकृत घमाइलो दिन होक्काइडोको पूर्वपट्टिमा जारी रहन्छ। दिनहरू पश्चिम तर्फ भन्दा कम हिउँ पर्ने छ तर तापक्रम अझै कम छ।
यदि तपाईं टोकियो वा ओसाकाबाट होक्काइडोमा जानको लागि योजना गर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ पुग्दा तपाईं अत्यन्त चिसो देखि अचम्मित हुनुहुनेछ। टोक्योमा, यदि तपाईंसँग कोट छ भने, तपाईं शहर हुँदै हिंड्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि होक्काइडोमा तपाई चिसो केवल कोटको साथ रोक्न सक्नुहुन्न।
Ok होक्काइडोमा जाडो संरक्षण सिफारिश गरियो
सप्पोरोमा मानिसहरू हिउँदमा अक्सर तातो भूमिगत क्षेत्र प्रयोग गर्दछन्
यदि तपाईं यो चिसो मौसममा होक्काइडोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म हिउँदको सुरक्षाका चार प्रकारहरूको सिफारिश गर्दछु।
तातो उच्च-टेक अंडरवियर तयार गर्नुहोस्
पहिले, कोटको बाहेक, तपाईं मफलर, टोपी र धागोबाट बनेको ग्लोभ्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई न्यानो अण्डरवियर पनि चाहिन्छ। हालसालै, सामान्य अण्डवियर भन्दा न्यानो उत्पादनहरु संख्यामा बढ्दो छ। उदाहरण को लागी, UNIQLO द्वारा रिलिज गरिएको "हीट टेक" ले यस्तो सामग्री प्रयोग गर्दछ जुन नमी शोषण गर्छ र तातो उत्पन्न गर्दछ। तपाईंले विभिन्न प्रकारका तातो लुगाहरू तयार गर्नुपर्दछ।
हिम जुत्ता वा एन्टी-पर्ची उपकरणहरू तयार गर्नुहोस्
बाहिर हिंड्दा हिउँमा चिप्लिनबाट रोक्नको लागि उपायहरू लिनु राम्रो हुन्छ। हिउँ जुत्ता प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ। हिउँ जुत्ता होक्काइडोमा प्राय जसो स्टोरहरूमा बेचिन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई टोकियो र ओसाकामा पनि किन्न सक्नुहुन्छ यदि यो जाडो छ।
यदि तपाईं सामान्य जुत्ता प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईं जुत्ताको एक्लोमा एन्टि-स्लिप उपकरणहरू लगाउनुहोस्। यी नयाँ Chitose अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र होक्काइडो मा धेरै अधिक स्थानहरूमा बेचिन्छ।
भूमिगत मार्ग प्रयोग गर्नुहोस्
मलाई लाग्छ कि सप्पोरोमा तपाईंले भूमिगत किनमेल केन्द्रको राम्रो प्रयोग गर्नु पर्छ। सप्पोरोमा, भूमिगत किनमेल केन्द्र न्यानो राख्नको लागि राम्रो तरीकाको रूपमा विकसित भएको छ। तपाईं चाहानुहुन्छ भने भूमिगत शपिंग मल्लबाट हिंडेर तपाईं साप्पोरो स्टेशनबाट मुख्य दर्शनीय स्थलहरूमा जान सक्नुहुन्छ। यदि हिउँ पस्दै छ र हावा शक्तिशाली छ भने, तपाईंले यी मार्गहरू हिड्नुपर्दछ बाहिरी चालमा बाध्य हुनुपर्दैन।
घर भित्र राम्रोसँग न्यानो राख्नुहोस्
होक्काइडोमा, घर बाहिर एकदम चिसो छ, तर कोठाहरू प्राय तातो छन्। यसको कारण जाडोमा कोठा धेरै न्यानो राख्ने चलन छ। होक्काइडो व्यक्तिहरूले घर भित्र भित्रै आफ्नो शरीर तताउँछन् र बाहिर जान्छन्। जब तिनीहरू कोठामा फर्कन्छन्, तिनीहरू फेरि आफ्नो शरीर तातो पार्दछन्। त्यसैले म सिफारिस गर्दछु कि तपाई आफैं भित्र न्यानो हुनु अघि घर बाहिर जानु भन्दा पहिले।
जापान मौसम एजेन्सीले घोषणा गरेको डिसेम्बरमा होक्काइडोको मौसम तथ्यांक तल छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (प्रारम्भिक डिसेम्बर)
साप्पोरो 3.8 ℃ (-2.4 ℃) 32.3mm (31 सेमी)
ओटारु 3.4 ℃ (-2.2 ℃) 43.9mm (39 सेमी)
Asahikawa 1.2 ℃ (-5.6 ℃) 31.2mm (54 सेमी)
Biei 0.2 ℃ (-8.3 ℃) 25.7mm (52 सेमी)
फुरानो 1.0 ℃ (-7.7 ℃) 25.9mm (48 सेमी)
Wakkanai 1.7 ℃ (-2.8 ℃) 39.7mm (47 सेमी)
अबाशिरी 2.5 ℃ (-3.7 ℃) 20.4mm (22 सेमी)
उटोरो 2.4 ℃ (-3.6 ℃) 37.1mm (30 सेमी)
नेमुरो 3.9 ℃ (-1.9 ℃) 18.6mm (6 सेमी)
Kushiro 4.3 ℃ (-5.0 ℃) 17.5mm (6 सेमी)
ओबिहिरो 3.1 ℃ (-6.4 ℃) 15.9mm (11 सेमी)
Hakodate 5.1 ℃ (-2.0 ℃) 26.3mm (21 सेमी)
डिसेम्बर २, २०१,, सप्पोरो कीता--जो हीरोबा [अकापुरा] स्थल शीर्षक, अकापुरा रोशनी, यो होक्काइडोको सब भन्दा पुरानो सडक रूख हो, प्रकाशमा जिन्कगो रूखहरू निर्देशित गर्दछ = शटरस्टक
होक्काइडो डिसेम्बरको सुरुदेखि पूर्ण शीत मोडमा छ। यदि तपाईं टोकियो वा ओसाकाबाट होक्काइडोमा सर्नुभयो भने, तयार हुनुहोस् किनभने तापक्रम पूर्ण रूपमा भिन्न छ।
यो बिहान र बेलुका धेरै चिसो हुन्छ, र तापमान पक्कै दिनको समयमा बढ्छ।
सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6: 49 and र सूर्यास्त समय १ 16:०० तिर हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय :6::33:15.42 र सूर्यास्त समय १ XNUMX..XNUMX२ तिर छ।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (डिसेम्बरको मध्य)
साप्पोरो 1.4 ℃ (-4.7 ℃) 37.7mm (46 सेमी)
ओटारु 0.9 ℃ (-4.3 ℃) 50.8mm (59 सेमी)
Asahikawa -1.5 ℃ (-8.4 ℃) 34.1mm (64 सेमी)
Biei -2.4 ℃ (-11.7 ℃) 22.4mm (65 सेमी)
फुरानो -1.8 ℃ (-11.3 ℃) 21.9mm (61 सेमी)
Wakkanai -0.5 ℃ (-4.8 ℃) 37.4mm (54 सेमी)
अबाशिरी 0.2 ℃ (-6.4 ℃) 16.8mm (26 सेमी)
उटोरो 0.0 ℃ (-6.0 ℃) 22.8mm (44 सेमी)
नेमुरो 1.7 ℃ (-4.1 ℃) 15.1mm (12 सेमी)
Kushiro 2.1 ℃ (-7.6 ℃) 12.5mm (6 सेमी)
ओबिहिरो 0.5 ℃ (-9.6 ℃) 11.9mm (15 सेमी)
Hakodate 2.6 ℃ (-4.1 ℃) 26.1mm (31 सेमी)
डिसेम्बर १२, २०१०, म्युनिक - क्रिसमस मार्केट ओडोरी पार्कमा आयोजित थियो धेरै पर्यटकहरूको भीड, सपोरो होक्काइडो = शटरस्टक
मध्य डिसेम्बरमा, सप्पोरो र हाकोडाटे जस्ता प्रमुख शहरहरूको डाउनटाउन क्षेत्रमा क्रिसमसको वातावरण राम्रो हुन्छ। तापमान वास्तवमै चिसो छ, तर यस्तो लाग्दछ कि पूरै शहर जीवन्त छ।
पूर्वी क्षेत्र सप्पोरो, हाकोडाटे, असाहिकावा र ओटारुमा हिउँ पर्दछ, तर कुशिरो र नेमुरो जस्ता पश्चिमी क्षेत्रमा कम हिउँ परेको छ।
सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6: 58 and र सूर्यास्त समय १ 16:०० तिर हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोको नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :6::42२ र सूर्यास्त समय १ 15.42..XNUMX२ जति छ।
सूर्यास्त धेरै चाँडो छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (डिसेम्बर ढिलो)
साप्पोरो 1.1 ℃ (-5.1 ℃) 41.8mm (56 सेमी)
ओटारु 0.9 ℃ (-4.4 ℃) 46.7mm (58 सेमी)
Asahikawa -1.9 ℃ (-9.5 ℃) 31.3mm (70 सेमी)
Biei -2.7 ℃ (-12.3 ℃) 21.6mm (66 सेमी)
फुरानो -2.3 ℃ (-11.9 ℃) 21.5mm (63 सेमी)
Wakkanai -0.7 ℃ (-4.8 ℃) 35.7mm (60 सेमी)
अबाशिरी -0.5 ℃ (-7.3 ℃) 22.2mm (37 सेमी)
उटोरो -0.7 ℃ (-6.4 ℃) 30.0mm (53 सेमी)
नेमुरो 0.7 ℃ (-4.8 ℃) 16.7mm (18 सेमी)
Kushiro 1.3 ℃ (-8.7 ℃) 20.8mm (14 सेमी)
ओबिहिरो -0.2 ℃ (-10.5 ℃) 18.4mm (20 सेमी)
Hakodate 2.4 ℃ (-4.3 ℃) 32.3mm (34 सेमी)
डिसेम्बर २२, २०१ 22: निसेको गाउँमा राती स्किइ .को साँझमा हवाई दृश्य। Niseko जापान मा शर्ट रिसोर्ट्स को लागी एक लोकप्रिय गन्तव्य = शटरस्टक
डिसेम्बरको अन्तमा, बादल र हिउँ परेको दिन पूर्वबाट प्रमुख शहरहरूमा जस्तै सप्पोरोमा जारी रहन्छ। अर्कोतर्फ, कुशिरो जस्ता पश्चिमी शहरहरूमा धेरै चिसो र घमाइलो दिनहरू जारी छ।
निसेको र अन्य स्की रिसोर्ट्समा, हिउँ मौसम स्की मौसम को शुरुआत चिह्न गर्न पर्याप्त ढेर गरीएको छ। सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6::58 र सूर्यास्त समय करिब १:16:०० छ।